2 Beresosɛm 4 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
2 Beresosɛm 4:1-22
4 Afei ɔyɛɛ kɔbere afɔremuka+ no; ne ntwemu yɛ basafa aduonu, ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa aduonu, na ne tenten yɛ basafa du.+ 2 Ɔyɛɛ ɛpo a wɔagu*+ no nso; efi ano kosi ano yɛ basafa du. Ano yɛ kurukuruwa hyia, na ne tenten yɛ basafa anum. Basafa aduasa hama na etwa ho hyia.+ 3 Ɔyɛɛ biribi te sɛ aduaba agude nkuruwankuruwa+ bi wɔ ase nyinaa hyiae; edu wɔ basafa biako biara mu, na atwa po no nyinaa ho ahyia.+ Aduaba agude nkuruwankuruwa no sesã so, nhankare abien, na woguu ɛno ne ɛpo no nyinaa prɛko. 4 Ɔde taa anantwi dumien akyi;+ abiɛsa ani kyerɛ atifi fam, abiɛsa ani kyerɛ atɔe fam, abiɛsa ani kyerɛ anafo fam, na abiɛsa ani kyerɛ apuei fam, na ɛpo no taa wɔn so, na wɔn akyi nyinaa hyehyɛ ase.+ 5 Ne pipiripi te sɛ nsayam; ɔyɛɛ ano te sɛ kuruwa ano, te sɛ sukooko nhwiren a apae.+ Bat+ susuhina mpem abiɛsa na etumi fa.+ 6 Afei nso ɔyeyɛɛ asɛn du. Ɔde anum sisii nifa so, na ɔde anum nso sisii benkum so+ sɛ wɔmfa nhohoro+ ɔhyew afɔrebɔde+ ho. Ɛpo no de, ɛwɔ hɔ ma asɔfo no sɛ wɔmfa nhohoro wɔn ho.+ 7 Ɔyɛɛ sika akaneadua+ du a ne nyinaa yɛ pɛ,+ na ɔde sisii asɔrefie hɔ; anum wɔ nifa so, na anum nso wɔ benkum so.+ 8 Bio nso ɔyɛɛ apon du, na ɔde sisii asɔrefie hɔ; anum wɔ nifa so, na anum nso wɔ benkum so,+ na ɔyɛɛ sika nyaawa ɔha. 9 Ɔyɛɛ asɔfo+ no adiwo+ ne adiwo kɛse+ no ne n’apon, na ɔde kɔbere duraa apon no ho. 10 Ɔde ɛpo no sii nifa so, apuei fam de rekɔ anafo.+ 11 Na Hiram yɛɛ ade a wɔde sesaw nsõ+ ne sofi+ ne nyaawa+ no. Enti Hiram wiee adwuma a ɔyɛ maa Ɔhene Solomon wɔ nokware Nyankopɔn fie no ho no: 12 Adum+ abien ne ntaaso+ nkuruwankuruwa a ɛwɔ adum abien no so, ne atena+ abien a ɛkata adum no so ntaaso nkuruwankuruwa abien no ho, 13 ne atena abien no ho granate akutu+ ahanan no, ne atena no biara ho granate akutu a ɛsesã so, nhankare abien a wɔde akata adum+ no so ntaaso nkuruwankuruwa no ho, 14 ne nsutwe nnaka+ du ne asɛn+ du a esisi nsutwe nnaka no so; 15 ne ɛpo no+ ne anantwi dumien a esi wɔn akyi+ no, 16 ne ade a wɔde sesaw nsõ ne sofi+ ne adinam+ ne ɛho nneɛma+ nyinaa. Eyinom nyinaa Hiram-Abif+ yɛ maa Ɔhene Solomon wɔ Yehowa fie no ho; ɔde kɔbere a wɔabere ho na ɛyɛe. 17 Yordan Mantam mu na ɔhene guu nneɛma yi; ogui wɔ dɔte a ɛsɔ mu wɔ Sukot+ ne Sereda+ ntam. 18 Solomon yɛɛ saa nneɛma yi pii pa, na wɔammu kɔbere no dodow ano.+ 19 Na Solomon yeyɛɛ nokware Nyankopɔn fie hɔ anwenne+ no nyinaa ne sika afɔremuka+ ne apon+ a wɔbɛhyehyɛ paanoo wɔ so, 20 ne akaneadua+ no ne ɛho sika amapa akanea+ a wɔbɛsɔ wɔ pia mu pia+ no anim sɛnea mmara no kyerɛ no; 21 ɛne nhwiren ne akanea ne afagya+ a wɔde sika yeyɛe, (sika amapa na wɔde yɛe,) 22 ne adumgya ne nyaawa ne nkuruwa ne ogya nkukuwa a wɔde sika amapa+ yeyɛe; ofie no akwan,+ Kronkron mu Kronkronbea apon ne asɔrefie no apon+ a wɔde sika yeyɛe no nyinaa.
^ Hwɛ 1Ahe 7:​23 ase hɔ asɛm.
2 Beresosɛm 4